Mpanamboatra rafitra labiera mamirapiratra | China Bright Beer System Factory & Mpamatsy
Anaran'ny vokatra: tanky labiera marindrano marindrano, tanky labiera mamiratra, antsoina koa hoe tanky serivisy, tanky fisotro misy alikaola, na tanky labiera mamirapiratra BBT. Ireo fiara mifono vy misy insulated PUR dia ampangatsiahina amin'ny alàlan'ny rano na glycol izay mivezivezy ao anaty duplicatores (fantsona mangatsiaka ao anaty palitao vy roa). Ny tanky mamirapiratra dia tsy maintsy asiana maotera ary mitazona tsindry, indraindray mihetsika toy ny BBT - Fiara fitehirizana labiera, tanky labiera misy tsindrona silindrika mitsivalana boaty fisotro misy alikaola ...
Kitapo labiera marindrano
Tavo labiera marindrano, antsoina koa hoe tanky serivisy, tanky ho an'ny zava-pisotro farany, na tanky labiera mamiratra BBT. Ireo fiara mifono vy misy insulated PUR dia ampangatsiahina amin'ny alàlan'ny rano na glycol izay mivezivezy ao anaty duplicatores (fantsona mangatsiaka ao anaty palitao vy roa).
Anaran'ny vokatra: Vertical Bright Beer Tank BBT, Bright Beer Tanks, tanky tsindrin-tsolika, tanky mpanompo, tanky famaranana labiera farany, tanky fitehirizana labiera - ireo no teny mahazatra indrindra, ao anatin'izany ny sambo fitaterana tsindry manokana natao hanomanana labiera karbonika alohan'ny fitoerany tavoahangy, famenoana barika na kaontenera hafa. Ny labiera karbonika voadio dia natosika avy amin'ny tanky labiera na tanky conical-conical ho ao anaty tanky fitehirizana tsindry eo ambanin'ny tsindry hatramin'ny 3.0 bar ....
Rindrina tokana tanky labiera mamiratra
Ny fitoeran-drano misy labiera mamiratra tokana dia apetraka ao amin'ny trano fampangatsiahana / efitrano mangatsiaka hitehirizana ny mari-pana hampiasana. Ka ny boaty misy labiera mamiratra tokana dia tsy mila mifandray amin'ny vondrona fanaraha-maso fa ampitaina fotsiny amin'ny fandrefesana, izay mora ampiasaina. Raha manana efitrano mangatsiaka mandehandeha any an-trano ianao, dia mety aminao ny boaty misy labiera mamiratra tokana.